China China ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta ihe | Beihua
1. Mmetụta mara mma kachasị mma.
2. Nrụ ọrụ mkpuchi ọkụ dị mma. Ọkụ ikuku nke ikuku ajị anụ a na-enweta na-adịkarị ala, ma ọ bụ ezigbo ihe mkpuchi nke ikuku, nke nwere ike ime ka ime ụlọ ahụ kpoo ọkụ n’oge oyi ma dị jụụ n’oge ọkọchị, ma chekwaa ike maka ndị ọrụ.
3. Nnweta ụda na mbelata mkpọtụ. Ihe bụ akụrụngwa isi nke osisi ajị anụ ụda na-adọrọ adọrọ bụ eriri nwere ezigbo ịnweta mineral na-eji njupụta nke 250-300Kg / m3. Ya mere, o nwere akụnụba nke ịbanye n'ime micropores, nke nwere ike ịmịcha ụda ebili mmiri ma belata echiche ụda dị mma, si otú a kwalite ịdị mma ụda nke ime ụlọ ma belata mkpọtụ.
4. Nchedo na mgbochi ọkụ.
5. Nchedo gburugburu ebe obibi Green. Ogwe ụda na -eme ka mmiri nwere mmiri dị n'ime ahụ adịghị emerụ ahụ mmadụ.
6. Ahịhịa-ihe nkwụcha mmiri. N'ihi na bọọdụ a na-enweta ajị anụ dị na ya nwere ọtụtụ micropores na mpaghara mmiri a kapịrị ọnụ buru ibu, ọ nwere ike ịnabata ma hapụ nsị mmiri dị na ikuku ma dozie iru mmiri ikuku n'ime.
7. Mbepu dị mfe na ịchọ mma dị mfe. Enwere ike ị nweta bọọdụ nke na - eme ka mmiri dị na ajị anụ nwere ike ị nweta ya, kechie ya, kee ya ma nwee ya, ma a ga - eji mma akwụkwọ ahụaja belata ya, yabụ enweghị mkpọtụ n'oge ịkpụ. Onwere otutu uzo eji abanye ya dika ihe eji edochi anya, tinye nnabata, ekpughere ekpughe, okpokoro zoro ezo, wdg.
8. Usoro mgbochi mmiri, mezue usoro ahụ dum site na ịpịpụta, Fourkpụchapu ihe anọ, nkụ, mkpụcha, nhicha, nhichasị, usoro na usoro ndị ọzọ.
9. N'oge ị na-ebufe bọọdụ ajị anụ ahụ, toaa ntị na ntụkwasị obi nke nkwakọ ngwaahịa, mmiri mmiri na njikwa mmiri, iji gbochie bọọdụ ahụ mmiri mmiri, nke ga-emetụta arụnye nrụnye.
10. A ga-ebunye bọọdụ ajị anụ dị nro ma gbanye ya n’oge a na - ejikwa ya. Ekwesịrị idobe bọọdụ ahụ ka ọ dị ọtọ, ọ bụghị n'ụzọ kwụ ọtọ, iji zere imebi akụkụ ya.
Nke gara aga: Ngwunye Minenweta Mac
Osote: Gbara Ọdụdọ Grid System